ViewSonic Monitors Vanowedzera Tsoka Dzavo Pan- India Kuburikidza neStrategic Alliance neCroma Stores.
ViewSonic Corp., inotungamira pasi rose inopa mhinduro dzekuona, ichangobva kuzivisa kuvhurwa kwechikamu chavo chekutarisa muzvitoro zvese zveTATA Croma, India yekutanga uye inotungamira omnichannel yemagetsi mutengesi neTata Group. Iwo akazara huwandu hweViewSonic monitors kubva kumitambo kuenda kubasa-kubva-kumba mhinduro dziripo kuCroma zvitoro mhiri kweIndia. Mukuwedzera, iyo brand icha… [Verenga zvakawanda ...] nezve ViewSonic Monitors Vanowedzera Tsoka Dzavo Pan- India Kuburikidza neStrategic Alliance neCroma Stores.
Maitiro ekutumira meseji nyore nhamba dzeWhatsApp dzisina kuchengetwa paIOS
WhatsApp yakakurumbira, Meta-inopihwa instant messaging (IM) app inobatanidza iOS uye Android vashandisi pasi rose. Dzimwe nguva tinoona nhamba yebhizinesi yatinoda kubata. Dzimwe nguva tingada kubvunza munhu asina kurongeka nezvechimwe chinhu. Muzviitiko zvese izvi, hatingadi kuchengetedza nhamba dzavo, tichiziva kuti hatisi kuzovanyorera zvakare mune ramangwana. … [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekunyorera nyore meseji nhamba dzeWhatsApp dzisina kuchengetwa paIOS
Heano akanakisa Black Friday 2021 PC uye Gaming zvibvumirano
Mwaka weBlack Friday wasvika, uye zvinoreva kuti izvozvi ndiyo imwe yenguva dzakanakisa dzekutenga marudzi ese ezvigadzirwa zvetekinoroji. Zvimwe zvezvakanakisa uye zvinonyanya kunakidza zvigadzirwa zvakatangwa mugore rapfuura kana zvakadaro zvinowanzoita zvinorema zvidzikiso panguva ino, zvichiita kuti uve mukana wakakwana wekuita zvimwe zvigadziriso. Kana iwe uri kutsvaga kukwidziridza komputa yako yazvino kana kuseta yemitambo, kana uri… [Verenga zvakawanda ...] nezve Heano akanakisa Black Friday 2021 PC uye Gaming zvibvumirano
Leaked Pixel 6a inopa kuratidza dhizaini yakafanana neiyo vanilla Pixel 6
Google ine imwe yediki uye yakapusa smartphone portfolios yechero Android OEM. Nhamba yekambani inomiririra yakanakisa iyo Google inofanirwa kupa maererano nehardware uye dhizaini. Zvichakadaro, iyo A-yakatevedzana inovavarira kukwanisika uku ichichengeta zvimwe zvepakati maficha eiyo flagship series. Kwangove mwedzi kubva Google yaburitsa mutsara wayo mutsva wePixel 6, asi… [Verenga zvakawanda ...] nezve Leaked Pixel 6a inopa kuratidza dhizaini yakafanana neiyo vanilla Pixel 6
Microsoft inosunungura Windows 11 kuvaka 22000.348 nema emojis matsva
Nhasi, Microsoft iri kuburitsa imwe sarudzo yekuwedzera yekuvandudza Windows 11. Kusiyana nezvakawanda zvinowedzeredzwa, zvakadaro, iyi inouya nechinhu chitsva. Iyo ine emojis nyowani yakaziviswa kumashure munaChikunguru. Zvakanaka, zvakadaro. Pakaziviswa mavara matsva eemoji, timu yedhizaini yakaratidza aya akanaka, mavara e3D aitarisa maererano nezvawaizowana ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Microsoft inoburitswa Windows 11 kuvaka 22000.348 nema emojis matsva
Enda kune peji 268